घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू इटालियन फुटबल खेलाडीहरू डोमिनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
एलबीले उपनाम संग फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ "Mimmo"। हाम्रो डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ।
डोमिनिको बेराडीको जीवन र उदय। छवि क्रेडिटहरू: खेलकुद, कस्ट्रमक्रोपलाटम र खेल मोल।
हो, सबैलाई आफ्नो बहुमुखी प्रतिभा र लक्ष्यको लागि आँखाको बारे थाहा छ। जबकि केवल केहि थोरै डोमेनिको बेराडीको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
डोमिनिको बेराडी दक्षिणी इटालीको क्यालाब्रिया क्षेत्रको कोसेन्जा प्रान्तमा रहेको शहर, कैर्याटीमा अगस्त 1 अगस्तको 1994st दिनमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नी आमा मारिया र बुबा बुबा लुइगीको तीन छोरामध्ये कान्छी हुनुहुन्छ।
डोमेनिको बेराडी आमा-बुबामा जन्मेका थिए जसको बारेमा थोरै मात्र ज्ञात छ। छवि क्रेडिट: PxHere र खेलकुद
थोरै चिनिएको जरा भएको इटालियन नागरिकको इटालीको कोसेन्जा प्रान्तको बोचिग्लेरो शहरमा हुर्केका थिए जहाँ उनी आफ्ना ठूला भाइ फ्रान्सेस्को र बहिनी सेभेरिनासँगै हुर्केका थिए।
डोमेनिको बेरार्डी कोसेन्जा प्रान्तको बोचिग्लेरोमा हुर्किए। छवि क्रेडिट: विश्वअटल र खेलकुद
सहरमा हुर्किएकी, बेरार्डी बहानामा थोरै थिएनन् जसले उसलाई हप्ताको हरेक दिन आफ्ना साथीहरूसँग फुटबल खेल्ने अवसर प्रदान गर्दछ। उसले कहिलेकाँही स्कूलबाट बच्न र खेल खेल्न रमाइलो गर्न पेट दुखाइ भएको नाटक गर्‍यो।
डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
फुटबलप्रेमी परिवारमा जन्म भएकोमा धन्यवाद, युवा बेरादी इरानीको कोसेन्जा प्रान्तमा रहेको मिर्टोको कास्टेलो फुटबल स्कूलमा भर्ना भए जहाँ उनले प्रतिस्पर्धी फुटबलमा पहिलो कदम चाले।
डोमेनिको बेरार्डीले क्यास्टेलो फुटबल स्कूलमा प्रतिस्पर्धी फुटबलको पहिलो कदम उठाए। छवि क्रेडिट: खेलकुद र TUON।
स्कूलमा प्रशिक्षणको क्रममा, बेरार्डीले सीप सिक्यो र प्रदर्शन गर्‍यो कि उनले उत्कृष्ट गोल स्कोर फारामलाई पूर्वचित्रण गर्‍यो। नतिजाको रूपमा, उनका कोच प्रायः टिमका सदस्यहरूलाई जिम्मा दिन्थे कि बलहरू गोलको लागि उनलाई पास गर्दै।
डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
जब बरारदी 13 मा 2008 वर्ष पुगेका थिए, उनले मिर्टोमा आफ्ना साथीहरूलाई बिदा गरे तर कोसेन्जाको फुटबल एकेडेमीमा भर्ना हुनका लागि जहाँ उनको युवा जीवनको सब भन्दा छोटो अवधि (2008 – 2010) खर्च हुनेछ।
डोसेनिको बेरादी अन्तिम फुटबल परिचय कार्ड कोसेन्जामा आउनु भन्दा पहिले। छवि क्रेडिट: खेलकुद
एक महत्त्वपूर्ण घटनामा, बरारदी बोडेनामा आफ्नो जेठो भाई फ्रान्सेस्कोको विश्वविद्यालय परिसरको भ्रमण गर्छिन्। क्याम्पस मैदानमा छँदा, उनी आफ्नो भाइ र विश्वविद्यालय समुदायका अन्य सदस्यहरूसँग पाँच-ए-साइड खेलमा मग्न भए। बेराार्डीलाई नजान, खेलहरूमा ससुओलोबाट स्काउट्सहरू थिए जसले उनको कच्चा प्रतिभालाई नोट गरे।
डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
यसैले, एक 16 वर्ष पुरानो Berardi Sassuolo ल्याइएको थियो जहाँ उनिहरुका माध्यम बाट उठ्यो। बरारदीले सेसनको बिरूद्ध सेरी बीको क्रममा अगस्ट 27 को 2012th मा क्लबको पहिलो टीमको लागि डेब्यू गरे र उनको पक्षलाई सेरी एमा पदोन्नती कमाउन मद्दत गर्न गए।
यद्यपि बेर्ार्डीको पदयात्राले धेरैलाई चाँडो प्रहार गर्न सक्दछ, तर यो कठोर विचारका निर्णयहरू बिना थिएन। छिटो उठ्ने फुटबलरसँग युरोपमा धेरै समूहहरू थिए जसले आफ्नो हस्ताक्षर खोज्यो। यद्यपि उनी आफैंलाई अपरिपक्व ठान्थे र ससुउलोमा परिपक्वता प्रक्रिया पूरा गर्न छनौट गरे।
डोमेनेको बेरार्डीले आफ्नो प्रभावशाली फारामका साथ ठूला क्लबहरूलाई आकर्षित गरे पनि ससुउलोमै रहने निर्णय गरे। छवि क्रेडिट: कास्ट्रामक्रोपलाटम।
डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
त्यसपछिका वर्षहरूमा (2013 - 2015) डोमेनेको इटालीको सबैभन्दा आशाजनक युवा फुटबलरहरू मध्ये एक साबित भयो र सबैभन्दा उत्कृष्ट युवा युरोपीयन फुटबलरको लागि एक्सएनयूएमएक्स ब्रावो पुरस्कार सहित धेरै व्यक्तिगत पुरस्कारहरू जित्यो।
अरु के छ त? उनी तीन पटक 100, 2013 र 2014 मा डोन बलनद्वारा संसारको शीर्ष-2015 युवा खिलाडी मध्ये एक सूचीकृत थिए। लेखनको समयसम्म अगाडि बढ्ने, बेराार्डी ससुउलोको सबै समयको शीर्ष स्कोरर हो र रोमा, टोटनह्याम र लिभरपूलबाट चासो लिने खेलाडीको राम्रो खोजी रहेको छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
डोमेनिको बेराडी लेखनको समयमा ससुउलोको सर्वाधिक गोल स्कोरर हो। छवि क्रेडिट: BleacherReport।
डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
डोमेनिको बेरादीको प्रेम जीवनको सवालमा अघि बढ्दै, कति व्यक्तिले आफ्नो डेटि history ईतिहासको पुस्तकमा फेला पार्न सक्दछन् र यो बायो लेख्दा उसको वर्तमान सम्बन्ध स्थिति के हो?
सबैभन्दा पहिले, आफ्नो प्रेमिका मंगेतर (पत्नी हुन) मा भेट भन्दा पहिले Berardi कुनै महिला मिति भनेर ज्ञात छैन - फ्रान्सेस्का Fantuzzi। फ्रान्सेस्काले युवा खेलमा बेरार्डीलाई पहिलो पटक देखे र त्यसपछि फेसबुक मार्फत उसलाई सम्पर्क गरे। तिनीहरू कहिलेदेखि अलग भएका छैनन् र छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) लाई कुनै पनि समय चाँडै स्वागत गर्नेछन्।
डोमेनिको बेराडी आफ्नो मंगेतर फ्रान्सेस्का फन्टुजीको साथ एक अप्ठ्यारो फोटोमा। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
डोमिनिको बेराडी मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट हुन्। हामी उसको पारिवारिक जीवनको बारेमा तथ्यहरूको रूपरेखा दिन्छौं।
डोमिनिको बेरादीको बुबाको बारेमा: Luigi Berardi बुबा हो। लुर्गी बेराडीको जन्म हुनुभन्दा अघि इन्टर मिलानको उत्कट प्रशंसक भएको छ। जे होस्, उनी ससुउलोका लागि नरम स्थान छन् जुन उनको छोराले खेल्छन्। तीन जनाका समर्थक बुबाले फुटबलको लागि बेरादीको जोशलाई सँभाल्नुभयो र आजसम्म उसलाई समर्थन गरिरहनुभएको छ।
डोमिनिको बेरादीकी आमाको बारेमा: मारिया बेरादीकी आमा हुन्। उनी एक गृहिणी हुन् जसले बेरार्डी र उनका भाइबहिनीहरूलाई हुर्काउँछिन्। तीन जनाको सहयोगी आमाको पनि फुटबलमा रुचि छ। वास्तवमा, उनी जुभेन्टस एफसीको समर्थक हुन् र पक्कै पनि उनको कान्छो बच्चा क्लब - ससुउलो।
डोमेनिको बेराडी आमा बुबा द्वारा हुर्केका थिए जसको बारेमा थोरै मात्र ज्ञात छ। छवि क्रेडिटहरू: ClipArtStudio र TransferMarket।
डोमिनिको बेरादीका दाजुभाइहरूको बारेमा: बरारदीका दुई ठूला दिदीबहिनी छन्। तिनीहरूमा उनका भाइ फ्रान्सेस्को र बहिनी सेभ्रिना पनि पर्छन्। जे होस् भाईबहिनीहरूको बारेमा धेरै थाहा छैन, तिनीहरू बेराडी जस्ता क्यारियर खेल व्यक्तिहरू होइनन्। यद्यपि दुबैलाई फुटबल मनपर्छ र खेललाई जोशसँग पछ्याउनुहोस्।
डोमिनिको बेरादीका आफन्तहरूको बारेमा: बेरादीको नजिकको परिवारबाट टाढा, उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमाको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन, जबकि उनका काका, काकी, काकी, भतिजा र भतिजोको पहिचान हुन सकेको छैन।
डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
बेरादीको व्यक्तित्वको कुरा गर्नुहोस्, उहाँसँग अद्भुत व्यक्तित्व छ जुन लियो राशि चिन्ह द्वारा निर्देशित व्यक्तिको जीवन्त प्रकृति झल्काउँछ। थप रूपमा, उहाँ सन्तुलित, सहज र सच्चाइमा पृथ्वीमा तल हुनुहुन्छ।
प्लेमेकर जसले मध्यम आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा जानकारी प्रकट गर्दछ, चासो र शौक छ कि F1 रेसि।, यात्रा, पौंडी, भिडियो खेल खेल, संगीत सुन्न र परिवार र साथीहरु संग क्वालिटी समय खर्च।
डोमेनिको बेराडीको F1 रेसि .मा रूचि छ। तपाईं हाजिर गर्न सक्नुहुन्छ चार्ल्स लेक्लेक फोटोमा? छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
कसरी berardi बनाउने र पैसा खर्च गर्ने सम्बन्धमा, उसको नेटवर्थ अझै लेखनको समयमा समीक्षा अन्तर्गत छ जबकि उसको बजार मूल्य € 20 मिलियन छ। बेरादीको थोरै चिनिएको सम्पत्तिका संस्थापकहरू उसको तलब र समर्थन सम्झौताबाट अघि बढ्छन्।
जे होस् प्लेमेकर आफ्नो लक्जरी कार र घरहरू देखाएर आफ्नो धन सम्पन्न गर्न द्रुत छैन, ऊ रिसोर्ट्समा महँगो यात्रा गर्नमा ठूलो छ जहाँ उसले पैसा खर्च गर्छ र साथीहरूसँग गुणस्तर समय खर्च गर्दछ।
डोमिनिको बेराडी आफ्नो साथी मार्को बेनासीसँग महँगो रिसोर्टमा राम्रो समय बिताउँदैछन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डोमेनिको बेराडी बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
डोमेनेको बेरादीको बाल्यकाल कहानी र जीवनी उनको बारेमा निम्न कम वा थोरै ज्ञात तथ्यको साथ राम्ररी लपेट्छ।
धर्म: डोमेनिको बेराडी धर्ममा ठूलो छैनन् जबकि लेखनको क्रममा त्यहाँ उसको विश्वासलाई दर्शाउने कुनै संकेतकहरू छैनन्। तसर्थ, यो एक विश्वासी छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न सकिदैन।
ट्याटूहरू: Berardi शरीर को लागी आफ्नो सुन्दर फिगर को एक आवश्यक थप को रूप मा मान्दछ। यसैले, उसको देब्रे पाखमा ठूलो ट्याटू छ। ट्याटुले गुलाबका साथ तारामा बेरादीको शर्ट नम्बर 25 प्रदर्शन गर्दछ। ट्याटु मुनि एक डोरी जस्तो डोरी हो।
डोमिनिको बेराडी ट्याटु प्रगति। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
धुम्रपान र मदिरा: डोमेनिको बेरादी लेखनको समयमा धुम्रपान गर्न जान्दैनन्। त्यस्ता जीवनशैलीका कारणहरू किन भन्ने हो कि फुटबल प्रतिभाले स्वस्थ जीवनशैली बिताउँदा प्राप्त हुने फाइदाहरूलाई बिर्सेको छैन।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डोमेनेको बरारदी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।